Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah: Fadhiga Aasiya | vfxAlert official blog
Fadhiga Aasiya iyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah
Sidaad ogtahay, «lacag waligeed ma seexato» xitaa marka dhammaadka usbuuca ama ciidaha macaamil ganacsi lacageed iyo hantida lagu kala sarrifto ay sii socdaan, jaantuska waxay umuuqataa meel bannaan oo u dhexeysa qiimaha furan / dhow iyo «farqiga». Forex waa midda ugu firfircoon inta lagu jiro kal-fadhiyada ganacsiga ee Yurub / Ameerika, laakiin xeeladaha habeenkii sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah ayaa sidoo kale ku siin kara faa'iido wanaagsan.
Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad go'aan ka gaarto waxa loola jeedo «Maalinta» iyo «Habeenka» ee la xidhiidha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah. Tusaale ahaan, ganacsatada dhinaca yurubiyanka ah habeenkii, waxay noqon doontaa Aasiya iyo isdhaafsiga calaamadaha ganacsiga ee Aasiya / Yurub. Waxaa loo tixgeliyaa «habeyn» xeeladaha iyo daabacadaha badankood suuqa sarifka lacagaha qalaad. Ma beddeli doonno fikradda la aasaasay, gaar ahaan tan iyo xilliyadan ay ku dhawaaqeen hanti shaqsiyadeed.
Inbadan oo kusaabsan fadhiga ganacsiga (00-09: 00UTC)
Maalinta ayaa bilaabata oo ogaata in isbeddellada inta badan laga sameeyo inta lagu jiro suuqan forex inta lagu jiro muddadan. Waxay ku jirtaa illaa rubuc wadarta mugga jagooyinka furan ee lammaanaha Aasiya, oo ay ku jiraan yuan. Astaamaha Muhiimka ah:
Liquidity-ga ayaa wali hooseeya oo saadaal kastaa waxay u noqon kartaa mid qaldan, in kasta oo xogta tilmaamayaasha ay jiraan. Ciyaartoyda waaweyn ugu horreyn waxay raadinayaan inay udhaqaaqaan suuqa jihada saxda ah iyo qiimaha sare / hooseeya. Arrinta faa iidada hadda jirta waxay noqoneysaa qodob labaad. Laakiin dabcan waxaa jira xakameyn guud!
Tirakoobyada aasaasiga ah, wararka ka imanaya Japan iyo Australia waxay dejinayaan safafka ugu horreeya ee labada lamaane halka JPY iyo AUD ay joogaan. Sida caadiga ah, hadalada saraakiisha waxay dhacaan dhamaadka kalfadhiga - falcelinta calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah way daciif yihiin, haddii aysan ahayn cirbadaha lacagta, dhulgariirrada iyo xoogagga kale ee majored;
Jagooyinka ugu waaweyn ee yen waxaa furay Bangiga Japan iyo saamilayda waaweyn ee la xiriira oo leh qayb ballaaran oo ka mid ah howlaha dhoofinta / soo dejinta ee ku lug leh Doolarka Mareykanka;
In kasta oo Yuan uusan ahayn lacag si buuxda loo beddeli karo, haddana warka ka imanaya Shiinaha wuxuu saameyn xooggan ku leeyahay gobolka oo dhan. Tusaale ahaan, xigashooyinka badeecada subaxnimo (biraha qaaliga ah, macdanta birta iyo bacriminta macdanta) ee Suuqa Isweydaarsiga ee Shanghai ayaa had iyo jeer sababa mala-awaal ku saabsan AUD (NZD) / USD, USD / JPY, heerar is dhaafsi ah.
Laga soo bilaabo 01: 00 UTC, marka isweydaarsiga saamiyada ee Shanghai iyo Hong Kong ay bilaabaan ganacsiga, waxaan raadineynaa kaqeybgalayaasha Shiinaha iyo lacagaha: haddii uu jiro firfircooni iibsashada doollarka, waxaan rajeyneynaa ficillo mala-awaal ah maalintii oo dhan, iibsashada falanqaynta yuroo-farsamo ayaa shaqeyneysa iyada oo aan fiiqneyn dhaqdhaqaaqa .
Eeg isbedelka maalinta hore. Haddii ay sarreyso fadhiga hadda ka socda labada lamaane ee waaweyn ayaa laga yaabaa inuu ku siiyo dhaqdhaqaaq dhinac cidhiidhi ah kanaalka habeenkii;
Qiyaastii 85% sarrifka lacagaha qalaad iyo hantida sarrifka waxay maraan Tokyo oo ah xarunta ugu weyn ee maaliyadeed ee Aasiya, in kasta oo saamiga Singapore, Shanghai iyo Hong Kong uu si aad ah u koray sannadihii la soo dhaafay. Bilowga Suuqa Tokyo Stock Exchange wuxuu noqon doonaa heerka isbadalka sicirka ee isbeddelka (xawaaraha).
Haddii aad tahay ganacsade ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo muddo gaaban ah oo aad qaadato qatar dhexdhexaad ah, natiijooyinka ugu fiican waxay noqon doonaan xulashooyinka USD (GBP) / JPY iyo GBP / CHF. Waxay u wareegaan marin aad u ballaadhan oo ah 75-95 dhibcood, taas oo kuu oggolaanaysa inaad la furto heshiis leh dhicitaan caddaalad ah oo muddo dheer soconaya xilligan xaadirka ah.
Muddo-dhexaad ah (oo leh muddo 2-3 saacadood ah) istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh, dooro iskutallaabyada AUD (NZD) / JPY iyo doollarkooda u dhigma. Isbeddelku wuu hooseeyaa, muhiimadna u leh xulashooyinka, waxaa jira isbeddello joogto ah iyo waqti-dheer ah. Dhaqaalaha New Zealand iyo Ustaraaliya, dhoofinta macdantu waxay siisaa qayb muhiim ah GDP, dhaqdhaqaaq kasta oo mustaqbalka badeecaduna wuxuu keenaa jawaab deg deg ah oo laga helo lacagaha qaranka.
Ka furitaanka 00: 00 (24: 00) UMT ee Suuqa Tokyo Stock Exchange horay ayaa loogu isticmaali karaa macaamilka ugu horreeya. Maalgashadayaasha Japan waxay leeyihiin anshax shirkadeed; badankood markiiba waxay u jeestaan dhanka «hoggaamiyeyaasha». Suuqa Forex, waxaad ka furi kartaa labo boos oo quful (multidirectional) oo sugaya meel fog oo ah 10-15 dhibcood oo aad la socon karto horumarka xaaladda. Ikhtiyaarrada, nasiib darro, uma oggolaanayso inaad tan sameyso, waxaad u baahan doontaa inaad kormeerto suuqa shaqsi ahaan oo aad yeelato falcelin wanaagsan .
Aasiya / Yurub (07–09: 00UTC)
Kal-fadhiga yurub wuxuu ka bilaabanayaa London, sida ay dad badani u maleeyaan, laakiin wuxuu ka bilaabmayaa Moscow, Frankfurt iyo Johannesburg, kuwaas oo si isku mid ah ula socda Aasiya muddo laba saacadood ah. Waxqabadka ayaa ugu hooseeya, inta badan kaqeybgalayaashu waxay kaliya xiraan macaashka / luminta hadda iyaga oo aan furin heshiisyo cusub.
Yurub guud ahaan, su'aasha ugu badan ee la isweydiiyo waxay khuseysaa doorka London ee xarun sarrifka marka la fiiriyo go'aanka ugu dambeeya ee Brexit. "Haddii tani ay saameyn ku yeelan doonto muddada is-dhaafsiga ee Aasiya iyo in kale. Sidee baa looga ganacsadaa suuq noocaas ah?». Waqtigan xaadirka ah, jawaab cad looma hayo su'aashan, in kasta oo ay qayb muhiim ah ka tahay isbeddelka ganacsiga ee London, labada lacagood iyo saamiyadu waxay durba u dhaqaaqeen Frankfurt, waxay u badan tahay, xaalada ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee Forex saadaasha isbeddela kama beddeli doonto, maxaa yeelay asal ahaan iskudhafku wuxuu sameeyaa hawl hagaajin ah, mana kasbado.
Lacagaha, xeeladaha, talooyinka
Waxaan ku bilaabaynaa talobixinta loogu talagalay yen (JPY), oo celcelis ahaan xisaabiya 18-20% ee mugga Forex maalin kasta. Bangiga Japan waa 55% dowlad-goboleed, saamiyada intiisa kale waxaa iska leh shirkado waaweyn waxaana looga ganacsadaa sidii hanti isweydaarsi caadi ah. Waa wax macquul ah xaaladdan oo kale inay si joogto ah u soo faragaliso gobolka, in kasta oo aysan jirin wax faragelin weyn oo sarrifka lacagaha ah tan iyo dhulgariirkii 2011:
USD / JPY saamayn kuma lihi oo keliya tirakoobyada maxalliga ah laakiin sidoo kale waxaa soo raaca horumarka asaasiga ah ee Mareykanka, gaar ahaan Shiinaha oo ah alaab-qeybiyeha ugu muhiimsan gobolka. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah lammaanaha ugu fiican ee lagu shaqeynayo Mushaharka Aan Beerta Ahayn maaddaama aysan jirin ficil dib u celin iyo saxitaanno mala awaal ah;
Falanqaynta farsamada waxay si fiican uga shaqeysaa isbeddelka, inta lagu jiro fadhiga Aasiya; Yen-ka waxaa loo isticmaali karaa inuu noqdo tilmaame hogaaminaya AUD iyo NZD. Suuqa iskutallaabta, sida AUD (NZD) / JPY, waxaad u baahan tahay waayo-aragnimo ku saabsan ka ganacsiga wararka, marka kuwa bilowga ah, marka hore, waxaa fiican inaad doorato xulashooyinka kale.
Qiyaasta ku xigta waa Doolarka Australiya (AUD, 11% ee fadhiga Aasiya), oo u baahan falanqeyn ku saabsan suuqyada saamiyada iyo badeecadaha ee Shiinaha si loo saadaaliyo. Dhoofinta dahabku waa mid ka mid ah waxyaabaha miisaaniyadda ugu muhiimsan, sidaa darteed waxaa jira xiriir sare oo u dhexeeya istiraatiijiyadda ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah iyo mustaqbalka u dhigma:
Saamaynta xoogan ee xogta aasaasiga ah ee Japan, Shiinaha iyo USA. Ficil kasta oo mala awaal ah oo uu sameeyo Bangiga Shiinaha wuxuu sababa falcelin deg deg ah oo ku saabsan jaantuska, waana sababtaas sababta labada lamaane inta badan loogu isticmaalo xayndaabyada ganacsiga, oo ay ku jiraan xulashooyinka.
Hantida, sababtoo ah baahsanaanta alaabta ceyriinka, waxay leedahay xisaab sare waxaana lagu xaqiijiyay mugga dhabta ah maalintii ganacsiga.
Dhammaan isbeddellada ama lacagaha badan ee leh dahab, New Zealand iyo Doolarka Kanada ayaa lagula talinayaa istiraatiijiyadda xulashooyinka ikhtiyaariga ah .
Doolarka New Zealand (NZD) ayaa dhameystiraya muuqaalka guud ee kooban. Waa mid ka mid ah TOP 10 hantida isweydaarsiga adduunka iyo xisaabaadka 10% ee wareegga Aasiya. Dhaqaalaha waxaa ku badan wax soo saarka beeraha (waxaa ku xiga birta birta iyo biraha aan birta ahayn), sidaas darteed cimilada cimilada ayaa si toos ah u saameysa heerka sarifka.
Si fudud loogu qanci karo falanqaynta farsamada, mala-awaalka suurtagalka ah ee kaliya xogta asaasiga ah iyo tirakoobka Mareykanka. Waxaan adeegsanaa istiraatiijiyado habeenkii oo dhexdhexaad ah !
Waxaan u jeesaneynaa tusaalooyinka istiraatiijiyadda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, oo loo qoondeyn karo taxane taxane gaar ah. Mabda'a aasaasiga ah ayaa ah in marwalba la xasuusto in hantidan ay yihiin kuwo "farsamo" ah, looma baahna "habab badan iyo tilmaamayaal lahaansho". Si taas loo xaqiijiyo, waa kuwan laba tusaale.
Dhamaan ikhtiyaarrada ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee ugu wanaagsan ayaa ka kooban qalabkan, kuwaas oo wax ku ool ah xitaa xuduudaha aasaasiga ah:
Bollinger waxaa loo adeegsadaa inuu yahay tilmaame kanaal oo leh ganacsiyo ka yimid xuduudihiisa, iyo tusmada kanaalka badeecadaha CCI wuxuu xaqiijinayaa gaabiska / dardargelinta xawaaraha suuqa, kaasoo had iyo jeer la joogo ka hor dib u rogis;
Laba tilmaamayaasha Bill William ee midigta. Burburka celceliska dhaqdhaqaaqa Alligator iyo heerka eber ee 'Awesome Oscillator' ayaa si fiican markale u shaqeynaya. Waxa ugu muhiimsani waa inaan hoos loo dhigin waqtiga M15-M30 iyo dhicitaanka baarka 2-3.
Soo koob . Ganacsiga habeenkii ee calaamadaha ganacsiga nool wuxuu u baahan karaa isbeddel ku yimaada habka caadiga ah ee nolosha, laakiin isla markaa, isbeddelkiisa hooseeya, maqnaanshaha dareenka degdegga ah ee dhacdooyinka aasaasiga ah ayaa si fiican ugu habboon bilowga. Saxsanaanta ka shaqeynta shumaca iyo qaababka farsamo, heerar qiimahoodu cad yahay oo xoogan ayaa suurtagal ka dhigaya in la helo faa iido xasilan xittaa dhigaalka ugu yar.
Iyo dheeraad ah. Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah kama uusan badneyn la-taliyeyaasha Forex, laakiin halkaas ayay joogaan oo xitaa iyaga oo aan lala xiriirin dillaal gaar ah Haddii aad isticmaasho qalabkaas oo kale, hubi waqtiga dejinta, waxaa suurtagal ah in dallaalku fuliyo amarrada waqtiga maxalliga ah marka loo eego UTC. Robot-ka ayaa laga yaabaa inuu si fiican u bilaabo shaqada «waqti qaldan», taasoo u horseedi doonta khasaaro!